Qajaarka koraya ee lagu koriyo | February 2020
Noocyada qajaarka sii kordhaya ee lagu koriyo
Haddii aad ku socoto waddooyinka meel kasta oo magaalada ka mid ah, waxaa laga yaabaa inaad ka heli karto dhismayaal qariib ah ee filim, dhalada ama polycarbonate. Dadku waxay muddo dheer isticmaaleen naqshadahan, oo lagu magacaabo geedo-cagaaran, si ay u koraan noocyo kala duwan oo dalag ah wakhti kasta oo sannadka ah. Muuqaalkan muuqaalku waa mid aad u jilicsan, laakiin waxay u baahan tahay waqti badan, dadaal iyo, nasiib daro, lacag.
Thanks to unpretentity, kobaca degdega ah iyo qajaarka qallajinta ayaa wakiil ka ah dhammaan beeraha, iyo dalal badan. Tan iyo tani waa mid ka mid ah khudaarta soo koraya oo si weyn u koraaya aqalka dhirta lagu koriyo, waa mid ka mid ah kuwa ugu horeeya ee soo gala cuntada ka dib jiilaal dheer oo aan lahayn fitamiino. Qaybta qajaar lafteeda, si ka duwan noocyada kale ee khudradda cagaaran, kuma faani karaan hanti nafaqo loogu talo galay dadka.
Ovaryaalka qajaarka ayaa huruud isu beddela: sababaha
Xilliga beeraha ma aha oo kaliya farxadda beergooyska, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah dhibaatooyinka. Ka fikir sababta ay qajaarku u noqdaan huruud ah aqalka dhirta lagu koriyo iyo waxa laga qabto. Nadiifinta bacriminta ee ciidda Carrada ku jirta aqalka dhirta lagu koriyo waxay noqon kartaa sabool ah xeryahooda macdanta, taas oo sababa huruud. Iyadoo la'aanta xaashida nitrogen marka hore, ka dibna bedesho midabka xididka iyo dhammaan meelaha u dhaxeeya.
Qajaar qajaarka laga bilaabo abuurka lagu koriyo
Qajaarka koraya ee aqalka dhirta lagu koriyo laga bilaabo abuurka, waxaa jira khatar ah in la helo ubaxyo badan oo qashinka ah. Si kastaba ha ahaatee, bannaanka u badan oo ku saabsan habka this sababtoo ah waa waqtiga ugu yar ee la isticmaalo marka la barbar dhigo habka seedling. Si aad u hesho goosashada qani ku ah iyo yaraynta khatarta, waxaa muhiim ah in la raaco talooyinka qaarkood, oo laga bilaabo xulashada miraha iyo diyaarintooda.
Sida loo xaliyo qalajinta qajaarka ee lagu koriyo
Caleemaha caleemaha waa dhibaatada ugu caansan ee beeraleyda soo koraya qajaarka lagu koriyo. Maqaalkayaga, waxaad baran doontaa sababaha tani u dhici karto, iyo sidoo kale sida loola dagaalamo xaaladdan iyo kahortageeda si qajaarku u noqdo mid caafimaad qaba oo si wanaagsan u miro dhaliya. Iskudaabinta cudurada Inkasta oo qajaarka ay yihiin dalag aan la qabin, mid ka mid ah sababaha qajaarku u fuulaan aqalka dhirta lagu koriyo waa jiritaanka cudurada.
Qajaarada koraya waxay u baahan tahay dheelitirka carrada iyo heerkulka hawada, iyo sidoo kale xakamaynta qoyaanka. Dhaqanka khudraddan wuxuu jecel yahay iftiin badan iyo kuleyl, sidaas darteed waraabinta habboon ee qajaarka waa tallaabada ugu muhiimsan ee daryeelka. Tani waxay si gaar ah u tahay khudaarta sii kordhaysa ee lagu koriyo. Inta badan bannaanka iyo bannaanka, ayadoo ay ugu wacan tahay isbeddelka cimilada dalkeena, isticmaalno koriinka polycarbonate, sidaas darteed, si aad u hesho goosashada qani ku ah, waxaa lagama maarmaan ah in la baro xeerarka aasaasiga ah iyo isdhexgalka ee waraabka qajaar.
Sida loo xiro qajaarka ee lagu koriyo ah
Qajaar la wadaago waa geedo sanadle ah, oo lagu garto jahwareer badan, mararka qaarkood waxay gaaraan dherer ka badan 2 mitir. Berrinka bannaan, caaradu waxay ku faaftaa sariirta, dhirtu waxay leedahay iftiin ku filan, sidaa daraadeed dhererka jeexjeexyada iyo cufnaanta maaha mid muhiim ah. In aqalka dhirta lagu koriyo, iftiimintu ma noqon doonto mid ku filan dhirta, caleemuhu waxay noqon doonaan huruud, jeexjeexyada waxay bilaabi doonaan kallana, miraha waxay noqdaan huruud, qalloocaanna ma siin doonaan buuxsamo.
Waa maxay sababta caleemaha qajaarka u noqdaan huruud iyo sidee baan u quudin karnaa dhirta si loo baabi'iyo sababta
Marka qajaarku ka baxo, kaliya shalay shalay raaxo iyo cagaar, si lama filaan ah u bilaabay inuu huruud isu beddelo, waxaad u baahan tahay inaad qaaddo tallaabooyin degdeg ah oo lagu badbaadinayo dhirta. Tani waa calaamad muujineysa jirro halis ah, sidaa darteed lama ilaawi karo. Ka fikir waxa sababa isbedelka aan loo baahnayn ee midabka cagaaran ee daboolka caleenta qajaarka iyo sida loola macaamilo.
Sidee si habboon u sameeyaan qajaarka ee lagu koriyo
Ka dib markii ay go'aansadeen in ay beeraan khudradda ama miraha iyaga u gaar ah, ninkii beerta ka shaqaynayay ayaa la kulmay waxyaalo badan iyo qarsoodi u baahan in la barto lana maarmo, sababtoo ah tirada iyo tayada dalagga waxay ku xiran yihiin iyaga. Iyo in this article waxaan ku ogaan doonaa sida loo hagaajiyo tilmaamahan marka koraya qajaarka lagu koriyo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qajaarka koraya ee lagu koriyo 2020